“Rehefa tsy hamaha ny olana ireo orinasa vaventy momba ny teknolojia. Isika ihany no hamaha azy.” · Global Voices teny Malagasy
“Rehefa tsy hamaha ny olana ireo orinasa vaventy momba ny teknolojia. Isika ihany no hamaha azy.”
Ny nataon'ny Nizeriàna nananganany fomba fampiatiana teny ao anaty teknolojia
Voadika ny 23 Mey 2019 11:40 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Italiano, Español, Português, polski, English
Sary an'i Kevin Harber ary nampiasàna ny lisansa CC BY-NC-ND 2.0 .
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Navoaka ity andrana manaraka ity ho ampahany amin'ny fanentanana anaty media sosialy hampiroboroboana ny fahamaroan'ny teny ety anaty aterineto niarahana tamin'ny Rising Voices. Andrana natsangana avy amin'ireo andiana bitsika natambatra izy ity, nampiasàna ny fampiasa Thread Reader ary nalamina sy narafitra ho an'ny famoahana.
Mazàna aho no miteny momba ny dadabeko (efa 92 taona izy izao) izay afaka mamaky teny sy manoratra amin'ny teny Yorùbá fa tsy amin'ny teny Anglisy. Niaina fiainana feno fahombiazana izy tamin'ny naha mpanefy volamena azy, ary nonina taminà faritra maro tao Nizerià.
Matetika no tonga ato an'eritreritro ny aminy rehefa misaina ireo olan'ny fampiatiana ao anatin'ny fitenin'ny teknolojia amin'izao fotoana izao aho. Efa im-betsaka aho no nandeha tao amin'ny tranony ary nanampy azy tamin'ny fampiasàna ny findainy, maka ireo hafatra efa tranainy, na mamaly ireo famandrihana sasantsasany natao tamin'ny telefaona.
Ao an-tranony sy ao amin'ny biraon'ny raiko, tany amin'ny fiandohan'ny taona sivifolo tany ho any, no voalohany nahitako telefaona misy efijery — araka izany ny olana dia tsy ny hoe izy tsy mbola nahita telefaona, na nampiasa azy ireny mba hifandraisana. Fa ny nametraka olana dia ny finday sy ny zavabaovao teknika miaraka amin'izy ireny.
Toy ny an'ny ankamaroan'ireo olona nanana vintana nahafehy ny resaka tranonkala sy ny teny anglisy, mora tamiko ny namafa ny horohoron'ireo olondehibe miatrika ny teknolojia vaovao. Nahoana ry zareo no tsy mahavita manakatra ny amin'izy ireny? Nefa rehefa maka bahana kely fotsiny, dia hita ny olana – ary ny azo atao.
Noforonina hamaha ny olana toy io ireo fitaovana toy ny famantarana ny feon'ny olona sy ny famadihana ny soratra ho feo: fandrisihana ny olona hampiasa ny fitaovana ananany amin'ny fomba mandeha ho azy sy voajanahary araka izay azo atao, amin'ny fampiasàna fihetsika voajanahary toy ny fitenenana sy ny fihainoana. Nefa ahoana raha toa ka tsy mahay teny anglisy ilay mpampiasa azy? Fanontaniana iray tsy dia tian'ireo orinasa maro misahana ny teknolojia nitodika ho ao Afrika loatra ny hiatrika azy, angamba koa satria betsaka ireo feo avy amin'ny saranga antenantenany milaza amin-dry zareo fa ‘miteny anglisy daholo isika rehetra. Ka inona no iasana saina?’
Ny fahatsapako dia, na teo aza ny taompolo maro nampiasàna teny anglisy ho toy ny teny nanabeazana, ny zavamisy henjana dia ny hoe an-tapitrisa ny olona no mbola tsy miteny anglisy, na manana ny fahalalàna takiana mba hampiasàna ireo fitaovana teknolojika maoderina.
Notantaraiko ny tranga iray niseho indray mandeha izay, teny amin'ny milina ATM / GAB mpitsinjara vola iray tao an-tànanan'i Lekki, izay nisy tovolahy iray manodidina ny 30 taona teo tsy nahay izay tian'ilay milina nambara tamin'ny hoe tsy afaka manome vola ‘tsy ankasa amin'ny 500′ na ny toy izany ilay izy.
Mety ho nahazo tsara kokoa izy raha tamin'ny teny Igbo.
Nefa ankehitriny, tsy misy ATM azonao ampiasaina amim-pahombiazana ka mampiasa ny teny nizeriàna. Ary na iray aza tsy misy afaka ampiasainao amin'ny alàlan'ny fitenenana aminy, na dia mety tsy ho olan'ireo Nizeriàna irery ihany aza izany. Kanefa, dia efa afaka miandrandra isika hoe tsy ireo orinasa goavana misahana teknolojia no hamaha ilay olana ho antsika. Isika ihany no hamaha azy.
Alaivo sary ao an-tsaina ny hoe raha mba afaka mampiasa ny telefaoninao ianao, na ny ATM sns.. amin'ny fiteny nizeriàna. Mety mba harisika handray anjara ao anatin'ny fiainana maoderina ny raibeko sy ireo an-tapitrisa hafa. Hevero ny momba ireo mety ho fahafahana mampiaty ara-bola. Iza no hametraka ny volany any amin'ny banky raha toa ka tsy afaka hisintona mora foana ny azy avy eo ?
Misy ireo fitaovana natao ho an'ny olona manana tsy fahatomombanana izay afaka misitraka ny fampidirana ny teny eo an-toerana. Ny telefaona iray afaka hisolo tena anao hamaky lahatsoratra dia afaka manome fahafahampo ny jamba izay tsy mahay miteny anglisy , sns…. Raha fehezina, betsaka no azo atao. Tsy resy lahatra amin'ny mety ho tombony azo amin'ireny famoronana ireny ny ankamaroan'ireo tsimoka tetikasa eo an-toerana, vokatr'izay ny tsy fisian'ireo fikambanana maro miezaka ny hamaha ny olana. Aza anontaniana ahy izay antony tsy anohanan'ny governemanta ny fikarohana mankany amin'ireny zotra ireny. Sady tsy haiko rahateo.
Araka izany, izay vitantsika no ataontsika, amin'ny fotoana ahafahantsika manao azy.
Tantaran'ny Nizeria farany
Miteraka ady hevitra ara-pitsarana ny fanentanana ara-politika ataon'ireo minisitra Nizeriana
Fifidianana 1 herinandro izay
Pôlitisiàna Nizeriàna mifantoka amin'ny fampielezankevitra fifidianana, manadino ireo mpampianatra mitokona eny amin'ny anjerimanontolo
Fanabeazana 3 herinandro izay
Hira maneho ny feon'ny vahoaka voarara any Nizeria sy Ogandà
Oganda 22 Marsa 2022